Rail in Thailand ~ Journey-Assist - Famerenana sy fividianana tapakila
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Transport. For rent. » Rail in Thailand
Fiarandalamby any Thailandy
Lamasinina tao Thialand
Ao Thailand, dia tsara ihany fa tsy amin'ny fitsangatsanganana an'habakabaka ihany, fa miaraka amin'ny rohy misy ny lalamby. Ny foibe afovoan'ny lalamby dia Bangkok (ny garan-dalamby lehibe ao Bangkok - Hualamphong), saingy tsy manakana anao tsy hiditra any amin'ny faritra misy ny firenena amin'ny lamasinina.
Voalohany indrindra, ao Bangkok mila miakatra ny metro ianao amin'ny alàlan'ny sampana manga mankany amin'ny station MRT Hua Lampong, aiza no misy ny lalamby fiantsonan'ny anarana mitovy Hua Lompong. (tondro eo amin'ny sarintany -https: //goo.gl/maps/BymoGhuBoPJgbFfXA)
Fiaran-dalamby ao Hua Lampong (Bangkok)
Fiaran-dalamby ao Hua Lampong
Ary raha manampy amin'ny fiaran-dalamby ianao bus na ferry, avy eo amin'ny firenena tsy hisy toerana tsy azo idirana ho anao :). Ireo mpizahatany mahaleo tena dia mampiasa fiaran-dalamby any Thailand.
Sarintany fiaran-dalamby any Thailand
Kilasy fiaran-dalamby any Thailand
Misy kilasy telo tokony hofidina, izay azo zaraina ho tsy manana rivotra fa tsy, ary mipetraka sy mandainga. Tsy midika akory izany hoe manana any amin'ny fiaran-dalamby avokoa aho rehetra - miankina daholo ny zava-drehetra ary miankina amin'ny elanelana sy ny isan'ny lamasinina. Mba hahafantaranao mialoha hoe inona ny kilasy ao anaty lamasinina ilainao ary miaraka amin'izay hahitanao ny fandaharam-potoana sy ny vidiny, dia tsaroantsika ny momba ilay toerana http://www.railway.co.th, izay misy ny fampahalalana ilaina rehetra.
Ary koa, amin'ny lamasinina lavitra dia misy fiara fisakafoanana foana;).
Kilasy 1 (kilasy voalohany).
Kompania tokana na tokana. Raha sendra mandeha irery ianao, ary tsy misy afa-tsy fanonganam-panjakana tokana, dia mitondrà roa mifanila. misy varavarana eo anelanelan'izy ireo;). Raha mandeha irery ianao, dia hidika izany varavarana izany. Raha ny mahazatra, fiara manana kilasy fametrahana rivotra ny kilasy 1, ary ny farafara aza dia milentika. Ny vidin'izy ireo dia saika mahatratra ny vidin'ny sidina kilasy ara-toekarena, saingy indraindray dia mbola manana saina ara-toekarena ihany ny mifidy fiaran-dalamby. Voalohany, ity dia traikefa mahaliana, faharoa, ny fomba fijerin'ny lamasinina misokatra avy amin'ny varavarankely amin'ny lamasinina, ary fahatelo, raha azo atao ny sidina lava sy ny fiampitana amin'ny alina, dia mitahiry ny vidin'ny alina iray ao amin'ny hotely ianao.
Kilasy faha-2 (kilasy faha-2).
Mizara ao anaty nosy (Seza 2) ary lainga (Natory kilasy faha-2). Sedentary, tsara ho an'ny fiampitana amin'ny andro antoandro. Ireo rivotra an-dakilasy ity dia zakan'ny rivotra. Miverina ny lamosin'ny seza, ary azo atao ny matory, toy ny amin'ny fiaramanidina. Ny saranga lainga dia mitovy amin'ny seza voatokana any amin'ireo firenena CIS. izany hoe safidy mendrika tokoa raha mila ampy torimaso tsara ianao. Karazan-tsarety roa karazana ity. Miaraka amin'ny efamira tsy misy varavarana, na miaraka amina fandriana eo am-pandehanana. Amin'ireo kojakoja - trano fidiovana mizara amin'ny fiara, fandroana amin'ny rano mangatsiaka ary efitra lamba manokan-tena amin'ny toerana tsirairay :). Ary koa, ny kilasy faharoa dia zakan'ny rivotra fa tsy anaovana rivotra (ny tsara dia tsara ho an'ny fiampitana amin'ny alina).
Kilasy faha-3 (kilasy faha-3).
Ny sarety ambany indrindra amin'ny sarety. Saika tsy tratry ny rivotra izy ireo. Ho fanamorana ny trano fidiovana miaraka amin'ny fantsom-batana vita amin'ny hazo na hoditra tsotra. Ho an'ny famindrana fohy dia mety tsara. Ambany ny saran-dalan'ny fiara toy izany. Ohatra, avy any Bangkok ka hatrany Ayutthaya, ny tapakila iray dia mitentina eo ho eo amin'ny $ 0,5 eo ho eo.
Karazanà tapakila fiaran-dalamby ao Thailand
Ny endri-javatra mahaliana iray dia ny amin'ny fiaran-dalamby dia afaka mividy ilay antsoina hoe tapakila mitambatra any amin'ny toerana tsy alehan'ny lamasinina, fa azo alaina amin'ny fiara fitaterana na sambo mihitsy aza. izany hoe Ny tapakila toy izany dia mety ho tafiditra amin'ny fiaran-dalamby, amin'ny fiara fitateram-bahoaka, na amin'ny sambo. Amin'ny alàlan'ny fomba, ny fandaharam-potoana sy ny vidiny dia azo jerena ao amin'ny tranokala ofisialy http://www.railway.co.th. Ary raha mividy tapakila iray amin'ny Internet ianao, dia ampiana ny vidin'ny fandoavana an-tserasera.
Fividianana tapakila fiaran-dalamby ao Thailand an-tserasera!
Afaka mividy tapakila amin'ny lamasinina an-tserasera ianao na dia ao anatin'ny telo volana aza, fa raha ny marina, raha mahaliana tapakila iray ianao 2 na Kilasy faha-3, amin'izay ny fisian'ireo toerana tsy azonao sorena. Misy efitrano foana foana. Fa ao Kilasy voalohanydia tsara kokoa ny mividy tapakila mialoha.
Fividianana tapakila ao amin'ny gara fiaran'ny boaty. Azonao atao ny mividy tapakila tapakila ao anatin'ny 60 andro. Saingy, ny tapakila ho an'ny kilasy ambany dia tsy azo amidy mialoha - misy foana ny efitrano.
Eto ambany no ahitanao ny tontolon'ny tranokala ofisialy momba ny fikarohana sy ny fivarotana ny tapakilan'ny lamasinina any Thailand. Aza miomana amin'ny zava-misy fa tsy ny karatra banky rehetra no ekena.